Mohamed Salah, Sadio Mane & Riyad Mahrez oo hogaaminaya liiska 10-ka xiddig ee isha lagu haayo koobka AFCON 2019 – Yaa Kula jira liiska? – Gool FM
Mohamed Salah, Sadio Mane & Riyad Mahrez oo hogaaminaya liiska 10-ka xiddig ee isha lagu haayo koobka AFCON 2019 – Yaa Kula jira liiska?
(Cairo) 21 June 2019. Koobka qaramada qaaradda Africa 2019 ayaa caawa ka bilaaban doona magaalada Qaahira ee dalka Masar, waana dhacdadii 32-aad ee tartankaan ay soo agaasimahaan xiriirka kubadda cagta qaaradda Africa.
Kulanka ugu horreeya waxaa caawa ciyaari doona wadamada Egypt iyo Zimbabwe, waana dhacdo aad loo sugayo waxa uu Mohamed Salah ka sameyn doono furitaanka tartanka maadaama uu yahay xiddiga maqaam ahaan ugu sarreeya qaaradda.
Waxaa jira 10 ciyaartoy oo la fahamsan yahay iney yahiin kuwa ugu shidan lana daawan doono inta uu tartanka socdo, waxaana soo xulay warbaahinta wadanka Masar.
Liiskaan waxaa hogaaminaya Mohamed Salah oo fasalkii lasoo dhaafay kabta dahabka ee gooldhalinta Premier League hantay sidoo kalana kooxdiisa kula guuleystay Champions League, waana xiddiga ugu saameynta badan Africa maadaama uu sidoo kale heysto abaalmarinta xiddiga sanadka qaaradda.
Sadio Mane ayaa liiska kula jira oo Salah la hantay Champions League iyo kabta dahabka, kama marna meesha wiilka hilaaciyay waayahiisa yurub ee Hamik Ziyech kaas oo ka mid ahaa kooxdii Ajax ee soo gaartay semi final-ka tartanka Champions League.
Wilfred Zaha oo ka tirsan Crystal Palace kana mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan horyaalka Premier League ayaa ku jira si la mid ah Iwobi iyo xiddiga iska diiday dhalashada faransiiska ee Cedric Bakambu.
3. Nicolas Pepe (Ivory Coast)
4. Riyad Mahrez (Algeria)
5. Hakim Ziyech (Morocco)
6. Wilfred Zaha (Ivory Coast)
7. Kalidou Koulibaly (Senegal)
8. Alex Iwobi (Nigeria)
9. Cedric Bakambu (Congo DR)
10. Andre Onana (Cameroon)
RASMI: Isku aadka wareega 16-ka Koobka adduunka Dumarka 2019 oo lasameeyay